सरकारले सिमेन्टमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्‍योः ध्रुब थापा - TV Annapurna
July 14, 2017 December 5, 2017 Annapurna TV
नेपालको पहिलो सिमेन्ट कारखाना हिमाल सिमेन्ट उद्योग सदाको लागि बन्द भए पनि चार दशकको अवधिमा नेपाली सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर मात्रै होइन निर्याततर्फ उन्मुख हुन पुगेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा विकास हुँदै गरेको गतिलाई हेर्दा स्थापित उद्योगको पूर्ण क्षमतामा सिमेन्ट उत्पादन हुने हो भने तत्काल निर्यात नगरी नहुने अवस्था आईसकेको छ । हुनत नीजि क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा हात हालेको १५ बर्ष मात्रै पुग्यो तर स्थापनाको ४१ औं वर्षमा प्रवेश गर्दा सिमेन्ट उद्योगको संख्या झण्डै ४ दर्जन भन्दा माथी पुगिसकेका छन् ।
१५ बर्षदेखी नीजि क्षेत्रले हात हालेपनि दश वर्षअघिसम्म औंलामा गन्न सकिने उद्योगका उत्पादन रहेकोमा अहिले झण्डै सय भन्दा बढि ब्राण्ड नेपाली बजारमा उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा छन् । नेपालमा कुल सिमेन्ट उत्पादन क्षमता वार्षिक ११ करोड बोराभन्दा बढी रहेको छ । बजार अनुपातलाई हेर्दा यो उत्पादन नेपालको लागि पर्याप्त रहेको उद्योग मन्त्रालयको भनाई छ । जुन बिद्यमान अवस्थामा उत्पादन भईरहेको छ । तर स्थापित उद्योगको क्षमता अहिले उत्पादन भएको सिमेन्टभन्दा दोब्बर छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको सिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नेखालकाे सार्थक प्रयास हुनुपर्ने धारणा सराेकारवालाहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । तर पछिल्लो समय नेपालमा खुलेका नयाँ केही सिमेन्ट उद्योगहरु भने नयाँ बजार खोज्नेमा भन्दा नेपालमा तत्कालै गलाकाँट प्रतिष्पर्धाको स्थिति उत्पन्न भएजस्तै गरी बजारमा आक्रमक उपस्थिति जनाउन थालेका छन् । यसै बिषयमा टिभी अन्नपूर्णले नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापासँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगको अवस्था र भविष्यका बारेमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उहाँ सँग गरेको कुराकानी:
नेपालमा पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादन र वितरणको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेको छ । यो भन्न पाउनु नै हाम्रा निम्ति खुसी र गौरवको विषय हो । तर, नेपाल जस्तो देश, जहाँ प्रचुर मात्रामा सिमेन्टको कच्चा पदार्थको भण्डारण छ, आजसम्म पनि सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयौं भन्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । राजनीतिक अस्थिरता र विविधखाले बाधा अड्चनले सिमेन्ट उत्पादनमा व्यवधान खडा गरेकोले पनि हामी अहिलेसम्म सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेका हौं । तर अहिलेचाँही सिमेन्ट उत्पादनको गति राम्रो छ । हामी आशावान् भएका छौं कि सिमेन्ट उत्पादनमा धेरै जटिलता र समस्याहरु यथावतै रहेपनि नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्यो भनेर औपचारिक रुपमा बोल्न अब धेरै कुर्नुपर्ने छैन् ।
मुलुकमा अहिले सिमेन्टको माग र उत्पादन कति छ ?
नेपालमा सिमेन्टको माग ४५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी छ । तर उत्पादन भने ३५ लाख मेट्रिक टन भइरहेको स्थिति छ । बाँकी सिमेन्ट अहिले पनि आयात भइरहेको छ । त्यसो त नेपालमा सिमेन्टको इतिहास जम्मा ४० वर्षको मात्र छ । सन् १९७५ मा सरकारी स्तरबाट हिमाल सिमेन्ट स्थापना गरेपछि सिमेन्ट उत्पादन सुरु भएको हो । तर नेपालको नीजि क्षेत्रले पनि सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेको १५ वर्ष मात्रै भयो । यही १५ वर्षको अवधिमा नै हो नेपालले सिमेन्ट उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गरेको । मेरो विचारमा नेपालको स्थिति राजनीतिक रुपले सामान्य मात्रै रहने हो भने पनि आगामी १ वर्षमा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनेछ । अहिले नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगकै मात्र कुरा गर्ने हो भने स्थापित उद्योगहरुको नेपाललाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । अङ्कमा नै भन्ने हो भने अहिले ८० लाख टन बार्षिक उत्पादन भईरहेको छ । लोडसेडिङ र कच्चा पदार्थको समस्या नभए यसको दोब्बर क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय सर्वसाधारणको बत्ति बाल्न लोडसेडिङ नभएपनि उद्योग कलकारखानामा अहिलेपनि ८ घण्टा लोडसेडिङ अझै कायम छ । २४ सैं घण्टा काम गर्न पाएको खण्डमा अहिलेको बजार मागको हाराहारीमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न कुनै गाह्रो छैन् ।
सिमेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आईसक्यो, सिमेन्ट निर्यातको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ ?
हो अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा एउटा उद्योगले केही उत्पादन थालेको छ । यसले नेपाली बजारलाई खासै असर पारेको जस्तो देखिदैंन । यद्यपी नेपालमै स्वदेशी उद्योगहरु खुल्ने क्रम पनि जारी छ । भएका पुराना स्थापित उद्योगले समेत आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने क्रममा छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली बजारलाई मात्रै हेर्नु पक्कै प्रयाप्त होईन । यस्तो अवस्थामा सिमेन्ट निर्यातका सम्बन्धमा संघले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ । हामीसँग अत्यन्त महत्वपूर्ण बजार पनि छ । तर, एउटै मात्र शर्त के हो भने हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनुप¥यो । त्यसको लागि उत्पादन लागत कम हुनैपर्छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बङ्गाल र बङ्गलादेशदेखी चीनको तिब्बत हाम्रा निम्ति सिमेन्टको फल्दोफुल्दो बजार हो जहाँ आजभन्दा धेरै बर्ष पहिले हिमाल सिमेन्ट उद्योगले समेत सिमेन्ट निर्यात गरेको अवस्था हो । ढिलोचाँडो नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट सिमेन्ट निर्यात गर्नुपर्छ र यसको लागी हामी सम्बन्धित निकायलाई समेत झक्झकाईरहेका छौ ।
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर सम्बन्धमा विभिन्न खाले चर्चा चल्ने गरेको छ । के हो वास्तविकता ?
नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरमा अब कुनै समस्या छैन् । नेपालका ठूला–ठूला आयोजनाहरुमा अब नेपाली सिमेन्ट नै प्रयोग हुन थालेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भएको छ भने नेपालका कुनै पनि सिमेन्ट फ्याक्ट्रिले आफ्नो उत्पादन नेपाल गुणस्तर चिह्न नलिई बेच्न नपाउने भएको छ । नियामक निकाय पनि गुणस्तरको विषयमा अत्यन्तै संवेदनशील बन्दै गएको छ र नियमित अनुगमनसमेत गरिरहेको अवस्था छ । तर एउटा समस्या अझै पनि यथावत् छ । जतिखेर नेपालमा पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुँदैनथ्यो, त्यतिखेर विदेशीले वा स्वदेशीले नै निर्माण गर्ने ठूला योजनाका निम्ति सिमेन्ट आयात गर्दा भन्सार र भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । भन्सार छुटमा सिमेन्ट आयात गर्दा नेपालमा उत्पादित सिमेन्टभन्दा धेरै सस्तो पर्न जान्छ । त्यस्ता नियम, नीतिमा केही फेरबदल त भए तर अझै प्रयाप्त हुन नसकेकाले अझै पनि ५३ ग्रेडको सिमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्ने भनेर राखिएको छ । तर नेपालका सिमेन्ट त्यही बराबरको गुणस्तर भए पनि ५३ ग्रेड भनेर उत्पादन गरिंदैन । यस्ता नियमले पनि नेपाली सिमेन्ट उत्पादनलाई ठूलो असर पु¥याएको छ । तर हामीले राज्यसँग भनेका छौं, यदि राज्यलाई ५३ वा ४३ ग्रेड छुट्याएरै सिमेन्टको आवश्यकता छ भने नेपालका उद्योगहरु त्यहीअनुरुपको सिमेन्ट उत्पादन गर्न तयार छन् । राज्यले ग्रेड र गुणस्तर कायम गरिदिनुपर्‍यो । हामीले निरन्तर यो आवाज उठाएपछि अब भने केही समयभित्रै नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालयले सिमेन्टको गुणस्तर मापनका लागी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ ।
नयाँ स्थानीय संरचनामा नेपाली सिमेन्ट उद्योगको अवस्था कस्तो हुने अपेक्षा छ ?
पहिलो त नेपाल नयाँ सरचनामा गएको छ जुन स्वागतयोग्य छ । हो कहिलेकाँही अर्बौ लगानी भएका उद्योगहरुमा स्थानीय स्तरमा हुने केही सानातिना अवरोधहरुले पनि उद्योग नै बन्दै गर्नेकी जस्तो प्रेसर पैदा हुने गरेका छन् । यसको खास कारण वातावरण प्रदुषणसम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट हुनु । भुमिसुधार र वन सम्बन्धि झण्झटिलो नियम लगायतका कारण कहिलेकाही यस्ता समस्या आउने गरेको अवस्य हो । यद्यपी नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा तीब्र गतिमा फड्को मारेको नेपाली सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिजको भूमिका सामान्य आँकलन गर्ने अवस्था छैन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय सरकारले नै यसबारे खास चासो लिनेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । यसकारण स्थानीय तह स्वायत्त बन्दै जाँदा नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागी अझै सहज वातावरण बन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
सिमेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउन थालेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई कस्तो असर पार्छ ?
नेपाललाई निक्कै छोटो समयमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उद्योगको सानो मेहनत छैन । लामो शसस्त्र द्धन्द्धका बेलादेखी दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ हुने बेलासम्म बिभिन्न कठिनाईहरु पार गर्दै नेपाली सिमेन्ट उद्योगले नेपाललाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउन लागी परेका छन । ठिक यहि बेला सिमेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्रिएको छ । स्वभाविक रुपमा यसले स्वदेशी उद्योगलाई केही असर त अवस्य पार्नेछ । किनभने नेपाली उद्योगहरु सानो लगानीमा बैंकमार्फत मोटो व्याजको ऋण लिएर चलेका छन । नेपालमा अझै दक्ष प्राविधिकको पनि अभाव छ । यस्तो अवस्थामा मल्ट्रिविलिनियर लगानीकर्ताहरु बजारमा आउदाँ उनीहरुसँग लगानीका लागी प्रशस्त रकम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट लिने ऋणको व्याजपनि तुलनात्मक रुपमा कमि अवस्य छ । यसबाहेक प्रशस्त दक्ष जनशक्ति हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउँदा सानो लगानीका स्वदेशी उद्योगलाई केही न केही असर अवस्य पार्नेछ तर आफुलाई चुस्त र प्रतिष्प्रर्धी बनाउने कुरामा स्वदेशी उद्योगहरु पनि चुक्ने भने अवस्य छैनन् । यद्यपी निक्कै कठिन अवस्थामा पनि नेपाललाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उद्योगले जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ, यसलाई बिर्सेर नेपालमा सिमेन्टमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आह्वान गर्नुको साटो स्वदेशी उद्योगलाई प्रोेत्साहन गर्ने खालको निति आउनुपर्छ । यसले नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा पनि स्वदेशी उद्योगको खास टिप्पणी हुनेछैन । स्वदेशी उद्योगहरुले पनि आफुलाई प्रतिष्पर्धी बनाउने मौका पाउने छन ।
पछिल्लो समयमा सिमेन्ट उद्योगहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरु के–के छन् ?
केही समयअघिसम्म नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको लोडसेडिङ नै हो । तर अहिले लोडसेडिङको अवस्था पहिलेजस्तो छैन । हुनत धेरै सर्वसाधारणका घरमा बत्ति बाल्न अहिले लोडसेडिङ छैन तर अहिले पनि सिमेन्ट उद्योगमा चाहिने जति विद्युत आपूर्ति भइरहेको छैन । सरकारले कम्तीमा पनि १८ देखी २० घण्टा विद्युत सप्लाई गर्नुपर्छ । अझ क्लिंकर उद्योगका लागि त २४ सैं घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनुपर्छ । तर अहिलेपनि उद्योगधन्दाहरुमा दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ कायमै छ । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगका लागी ट्रन्सपोटेसन सबैभन्दा महत्पूर्ण कुरा हो । बिडम्बना अहिलेपनि ठूला पारवहन गर्ने सडकहरुको अभाव छ । चुनढुंगा सञ्चालनका लागि स्थानीयस्तरमा समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् । त्यस्तै वन, वातावरणसम्बन्धी विभिन्न कानुनी झन्झट रहेका छन् । यसबाहेक सिमेण्ट उत्पादनका लागी कोईला अपरिहार्य छ जुन नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । तर तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै आयात हुने कोइला अहिले पनि रक्सौल नाकाबाट मात्रै भित्राउन पाईन्छ तर सो नाकामा सधैजसो भिडभाड हुदाँ नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले एकातिर चाहेका अवस्थामा नेपाल भित्राएर उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने, अर्कोतिर कोलकत्ता बन्दरगाहमा लामो समयसम्म रोकिनुपर्ने, भण्डारबापत मोटो रकम भाडास्वरुप तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यस्ता समस्याको सरकारले समाधान गरिदिनुपर्‍यो ।
अन्तर्वार्ता, अर्थ / वाणिज्य
चितवनका आठ सय ४२ पसल तथा उद्योगको अनुगमन
ट्रम्पले फ्रान्सकी फर्स्ट लेडीको गालामा पेरिस स्टाइलमा चुम्बन गरेपछि
अरुण तेस्रो हाइटेन्सन लाइनको अलाइनमेन्ट परिवर्तनको माग, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
अभिमन्यु लामीछाने, उदयपुर । अरुण तेस्रो हाइटेन्सन लाइनको अलाइनमेन्ट परिवर्तनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका...